EURO 2016: Faransiiska oo noqday xulkii ugu horreeyay ee iska xaadiriya wareega 16-ka…+SAWIRRO – Gool FM
(France) 15 Juunyo 2016. Xulka marti galinaya Euro 2016 ee Faransiiska ayaa guul ay u dhibtootay ka gaartay xulka yar ee Albania oo ay kaga adkaatay 2-gool oo aad u soo daahay, waxayna noqdeen xulkii ugu horeeyay Euro 2016 ee iska xaadiriya wareega 16-ka
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa la isku mari waayay bar-baro 0-0.
Xulka Faransiiska ayaa ku soo bilaabay ciyaarta wiilasha da’da yar ee Coman ee u safta Bayern Munich iyo xiddiga Man United Martial iyadoo keedka la dhigay Paul Pogba iyo Antoine Griezmann.
Xiddigaha ugu da’da yar ee xulka Faransiiska ugu soo bilowday tartanka Euro ayaa kala ah Kingsley Coman 20-sano iyo 02-maalmood, Karim Benzema 20-sano -173-maalmood, Anthony Martial 20- sano iyo 193-maalood.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaan la isku helin wax fursad ah oo goosha lala beegsaday inkastoo xulka Faransiiska ka fir-fircoonaa uu ka kubbad heysasho badnaa xulka Albania.
Waa kulankii ugu horreeyay tartanka Euro oo lagu kala nasto qeybta hore 0-0 oo aan wax bartilmaameed toosan la isku sameyn tan iyo 2008 kolkaa ay wada ciyaareen Romania-France.
Markii ay bilaabatay qeybtii labaad ee ciyaarta Faransiiska ayaa durba keenay Paul Pogba oo ay ku badaleen Anthony Martial.
Bilowgii qeybta hore France ayaa heshay fursad daqiiqadii 47-aad kaddib kubbad uu soo karoosay Blaise Matuidi waxaana madax galay Kingsley Coman oo birta hoose sii xoqotay.
Payet ayaa baas khatar ah siiyay xiddiga badelka ku soo galay ee Pogba balse xiddiga Juventus ayaa marsiiyay birta korkeeda isagoo sii dhacaya daqiiqadii 54-aad.
Kingsley Coman ayaa la badelay daqiiqadii 68-aad iyadoo la keenay xiddiga Atletico Madrid Antoine Griezmann.
Giroud ayaa madaxa galay kubbad kaga timid Patrice Evra laakiin waxay ku dhacday birta hoose daqiiqadii 69-aad.
Xulka Faransiiska ayaa iskudayay 16- shuut oo ay ku jirto kuwa laga xirtay waana shuudadkii ugu badnaa oo ay koox sameyso iyadoo aan bartilmaameed toos ahayn tartanka Euro tan iyo 1980-kii.
Faransiiska ayaa ugu dambeyn waxay jaftamaan gool ka helay xiddiga badelka ku soo galay geesiga La Liga ee Antoine Griezmann kubbad uu soo karoosay Rami oo uu madaxa ku dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta waana laadkii ugu horreeyay oo bartilmaameed toos ah 90-kii daqiiqo ee kulanka.
Wuxuu noqday laacibkii ugu horreeyay ee gool u dhaliyay Faransiiska Euro isagoo bedel ku yimid tan iyo 2000 (Wiltord iyo Trezeguet).
Payet ayaa goolkii labaad ee ciyaarta ahna kiisii labaad ee Euro dhaliyay daqiiqadii ugu dambesay waqtigii lagu daray kubbad uu si fiican ugu qaatay labo daafac dabadeedna shabaqa dhex dhigay.
Man United oo maaliyadeeda oo saxiixan u soo dirtay nin xabsi ku jiray 5-sano...(Maxay tahay sababta ay ugu soo dirtay, halkuuse ku xirnaa?)+SAWIRRO